Qodobada Jackie Hermes on Martech Zone |
Maqaallada by Jackie Hermes
Jackie Hermes waa maamulaha guud ee Aaminaad, Hay'ad fadhigeedu yahay Milwaukee oo ka caawisa bilawga bilawga barnaamijyada-sida-adeegga (SaaS) inay helaan dakhli oo ay si dhakhso leh u koraan, iyo wada-aasaase Toddobaadka Hal-abuurka Haweenka. Aad u firfircoon LinkedIn, Jackie wuxuu kiciyaa doodaha ku saabsan nolol maalmeedka iyo caqabadaha soo kordha shirkad kabaha la dulsaaray. Jackie wuxuu lataliyaa bilawga ardayda adoo adeegsanaya Commons, waa wada-abaabule Bilowga Milwaukee EMERGE, iyo lataliye Maalgashadayaasha Malaa'igta Dahabiga ah. Ka sokow ka qayb qaadashadeeda xirfadeed, Jackie waa hooyo korsanaya oo koronto qabta iyo duuliyaha mustaqbalka.
Sideen U Dhisay Hal Milyan oo Doolar Oo Ganacsi B2B Ah LinkedIn Video
Khamiista, Diseembar 10, 2020 Khamiista, Diseembar 10, 2020 Jackie Hermes
Fiidiyowgu wuxuu si adag u kasbaday booskiisa oo ah mid ka mid ah aaladaha suuqgeynta ugu muhiimsan, iyadoo 85% ganacsiyada adeegsadaan fiidiyowga si ay u gaaraan himilooyinkooda suuq-geyn. Haddii aan kaliya eegno suuqgeynta B2B, 87% ee fiidiyeyaasha fiidiyowga ayaa ku tilmaamay LinkedIn inay tahay kanaal wax ku ool ah oo lagu hagaajiyo sicirka beddelaadda. Haddii ganacsatada B2B aysan ka faa'iideysan fursaddan, si dhab ah ayey u tebayaan. Aniga oo dhisaya istaraatiijiyad sumadeyn shakhsiyadeed oo udub dhexaad u ah fiidiyowga 'LinkedIn', waxaan awood u yeeshay inaan ganacsigeyga u koro wax ka badan